गोर्खा फिडलाई अग्रणी उद्योग बनाउने लक्ष्य छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता गोर्खा फिडलाई अग्रणी उद्योग बनाउने लक्ष्य छ
अन्तरवार्ता 48 views
सुरेशकुमार क्याल , प्रबन्ध सञ्चालक, गोर्खा फिड इण्डष्ट्रिज
बाराको जितपुरमा सञ्चालित गोर्खा फिड इण्डष्ट्रिजले सञ्चालनको २ वर्षमै उत्पादनमा विविधीकरण अपनाएको छ । शुरूमा कुखुराको दाना उत्पादन गरेको यो उद्योगले अहिले केटल फिड (गाईभैंसीको दाना) उत्पादन थालेको छ । १२ करोड रुपैयाँको लगानीमा क्याल समूहले स्थापना गरेको यो उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक सुरेशकुमार क्याल नेपालमा दाना उत्पादनको सम्भाव्यता प्रचुरमात्रामा रहेको दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ, क्यालसँग दाना उद्योग र यसको बजारका सम्भाव्यता तथा समस्याबारे आर्थिक अभियानले गरेको बजार संवाद :
हालै केटल फिडमा हात हाल्नुभएको छ । बजार प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
२ वर्षअघि शुरू भएको गोर्खा फिडले अहिले केटल फिडको पनि उत्पादन थालेको छ । शुरूमा कुखुराको दानाबाट उत्पादन थालिएको थियो । नेपाल कृषिकर्ममा आधारित देश भएकाले कुखुरा र पशुपालनको सम्भाव्यता प्रचुरमात्रामा छ । यसले पनि दाना उद्योगको बजारलाई विस्तार गरिरहेको छ । यही अवसरलाई उपयोग गर्न केटल फिडमा हात हालिएको हो । हाम्रो उत्पादनको माग निरन्तर बढिरहेको छ । कुखुराको दानामा पाएको बजार प्रतिक्रियाको उत्साहले नै हामीलाई केटल फिड उत्पादनतिर प्रोत्साहित गरेको हो ।
गोर्खा फिडले अहिले अन्य कस्ता उत्पादन बजारमा पुर्‍याएको छ ?
हाम्रो उद्योगले अनुपम ब्राण्डमा दाना उत्पादन गर्दै आएको छ । शुरूमा कुखुराको दाना उत्पादन ग¥यौं । अहिले २ महीनादेखि त्यही ब्राण्डमा २५ र ५० किलो तौलको बोरामा केटल फिड उत्पादन भइरहेको छ ।
तपाईंको उद्योगको उत्पादन क्षमता कति हो ? क्षमता पूर्णरूपमा उपयोग भइरहेको छ कि छैन ?
गोर्खा फिडले प्रतिघण्टा १२ मेट्रिकटन दाना उत्पादन गर्न सक्छ । तर, लोडशेडिङका कारण पूरा क्षमता उत्पादन हुन सकेको छैन । यसमा सुधार आयो भने उत्पादन स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । बजार विस्तारसँगै क्षमता उपयोग पनि बढ्ने नै छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
दाना उद्योगका अन्य समस्या के कस्ता छन् ?
अरू पनि समस्या छन् । यो उद्योगमा सम्भावना भएजस्तै समस्या पनि छन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्युत्को छ । पहिलेको तुलनामा केही सुधार भए पनि आवश्यकता जति बिजुली पाइएको छैन । न्यून भोल्टेज र पटकपटकको ट्रिपिङजस्ता कारणले अपेक्षित परिमाणमा उत्पादन हुन सकेको छैन । कच्चा पदार्थको प्रबन्धमा पनि समस्या नै छ । स्वदेशमा आवश्यकताअनुसार कच्चा पदार्थको उपलब्धता छैन । केही परिमाण स्थानीय बजारबाट आपूर्ति भए पनि आयातकै भर बढी छ । भारत र अन्य देशबाट आयात गर्दा महँगो परेको छ । अहिले पारवहनमा अनेक समस्या छन् । वैदेशिक र आन्तरिक पारवहनमा समस्या छ । यस्ता अवरोधको समाधान हुने हो भने सम्भाव्यताको दोहन गर्न सजिलो हुने थियो ।
बजारमा विभिन्न ब्राण्डमा दाना पाइन्छ । तपाईकै दाना नै किन उपयोग गर्ने ?
दानाको उच्च गुणस्तरका लागि कच्चा पदार्थको छनोटमा विशेष ध्यान दिइएको छ । गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा नवीन प्रविधिले नै दानाको गुणस्तरीयता कायम हुने हो । हामीले पीएलसी प्रविधिबाट दाना उत्पादन गर्छौं । यसबाट स्वचालित रूपमा दानाको गुणस्तर कायम हुन्छ । कच्चा पदार्थको मात्रा निर्धारणमा स्वचालित प्रविधि विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ । स्तरीय र नवीन प्रविधिबाट उत्पादनमा उच्च गुणस्तर दिएका छौं । यो गुणस्तरका कारण कुखुराको वृद्धि चाँडो हुन्छ भने गाईभैंसीलाई आवश्यक पौष्टिक आहार उपलब्ध हुन्छ । यसबाट किसानले अपेक्षित लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । अनुसन्धान, प्रयोग र परीक्षणका लागि हामीसँग पशुपक्षीको स्वास्थ्य र पोषणबारे जानकार दक्ष प्राविधिकको टीम छ । यसले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा कत्तिको छ ?
सम्भावना भएकै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा पनि हुने हो । तर, हामीले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धाको आधार बनाएका छौं । गुणस्तर र उद्देश्यमा कुनै खालको सम्झौता गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । विगत २ वर्षदेखि दाना उत्पादन गरिरहेका छौं । स्वदेशी बजारका अधिकांश स्थानमा उत्पादन पुर्‍याइसकेका छौं । ६ महीनामा विगतको तुलनामा हाम्रो उत्पादनको कारोबार दोब्बरले बढेको छ । हामीसँग एकपटक सम्पर्कमा आएका व्यवसायी र कृषक अन्यत्र गएका छैनन् । यो उचित मूल्यमा गुणस्तरीय दाना दिन सकेकै कारण सम्भव भएको हो ।
आगामी योजना पनि केही छन् कि ?
अहिले कुखुरा र गाईभैंसीका लागि दाना बनाइरहेका छौं । निकट भविष्यमा माछाका लागि पनि दाना उत्पादनको योजना छ । हामीले यो उद्योगलाई उत्पादन क्षमता बढाउँदै दाना उत्पादनमा अग्रणी बनाउने लक्ष्य राखेका छौं ।